Fifandraisan-davitra : hiantsoana ny tsy miankina handray anjara | NewsMada
Fifandraisan-davitra : hiantsoana ny tsy miankina handray anjara
Vondron’ny mpandraharaha 20 avy amin’ny sehatry ny fifandraisan-davitra, nihaona tamin’ny minisitry ny Paositra sy fifandraisana-davitra, Neypatraiky André Rakotomamonjy, ny 16 febroary teo tao amin’ny Ibis Hotel. Nampahafantarina azy ireo tamin’izany ireo tetikasa 10 mahakasika ny fampandrosoana ny « Numérique » atao eto Madagasikara. « Tsy afa-misaraka amin’ny « Numérique » ny fampandrosoana an’i Madagasikara ». Izay ny azo ilazana ireo tetikasa rehetra tarihin’ny minisitra manokana, raha nanazava ny asa hatao ho tombontsoan’ny besinimaro.
Tanjona ny hahitana famatsiam-bola ho an’ny tetikasa tsirairay momba izany « Numérique » izany. Tsy ho tratra ny famatsiam-bola ilaina raha tsy mandray anjara ny eto an-toerana sy ny any ivelany. Koa afaka mijery izay tandrify azy ny mpandraharaha amin’izay mety ho fiaraha-miasa sy fampiasam-bola mifanaraka amin’ny tombontsoany sy ho amin’ny ho aviny.
Fanirian’ny fitondram-panjakana ny hametraka fotodrafitrasa ampy ho an’ny fampandrosoana ny “Numérique” eto amintsika, indrindra manoloana ny fahamaroan’ny tanora.
Vonona ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra (MPTDN) hanampy ny tanora hahafehy izany teknolojia avo lenta izany, fitaovana ho an’ny fanabeazana sy ny fanofanana. Hisarihana ny tanora, ohatra, ny foibe fanofanana manomana azy ireo ho matihanina eo amin’ny fiantsoana sy fampiasana TIC (Technologie de l’information et de communication). Hahafahan’ny tanora malagasy mifaninana amin’ireo tany arabo izany ary mety handraisana azy ireo ho mpiasa vaovao any amin’ireo foibe fiantsoana efa misy sy vao hajoro eto Madagasikara.
Foibe iray ho fanafainganana ny asan’ny orinasa, hapetraka any Fianarantsoa. Afaka hivelaran’ireo tanora injeniera mivoaka amin’ny oniversite eto an-toerana izany, izay tsy hita loatra ankehitriny ny lanjan’izy ireo. Tetikasa mety hampisongadina ny fahaizan’ireo tanora amin’ny fikarohana vitany sy hahafahan’izy ireo mivarotra izany vokatry ny fikarohana izany ho an’ny mpampiasa vola na mpiara-miombon’antoka.
Smart City, Tic Bus
Tetikasa iray hafa, Smart City, hapetraka any Nosy Be ny voalohany, hitarina manerana ny Nosy amin’ny taona manaraka. Hahafahana manao izany ny maha mpikambana an’i Madagasikara ao amin’ny Smart Africa manomboka amin’ny volana marsa ho avy izao. Tic Bus indray, fomba fampitam-baovao manerana ny Nosy amina fiara iray. Natomboka niasa teto izany nandritra ny fihaonamben’ny Frankofonia. Hitety faritra maro io Tic Bus io amin’ity taona ity, miaraka amin’ny mpanentana ho any amin’ireny toerana saro-dalana ireny, hahalala izany teknolojian’ny fifandraisana izany.
Ny tetikasa rehetra faritana mifandraika amin’ny fanatsarana ny lalàna amin’io sehatra io, hisian’ny tontolon’ny toekarena mifanaraka amin’izany sy azo antoka ho an’ireo mpandraharaha. Manentana ny sehatra tsy miankina rehetra ny minisitra Neypatraiky André Rakotomamonjy, mba haneho ny fahavononany izay te handray anjara amin’ny fampiroboroboana ny “Numérique”.
Varavarana misokatra ho an’ny fampandrosoana maharitra ireo rehetra ireo, irariana ny hijoroan’izany, miainga avy amin’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina ho tombontsoan’ny vahoaka, indrindra ny tanora zanaka malagasy maro anisa.